एमाले र माओवादीको ईतिहास आजबाट समाप्त ! – SamajKhabar.com
एमाले र माओवादीको ईतिहास आजबाट समाप्त !
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:५२
काठमाडौं । सिक्काको एउटा पाटोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना छ । अर्को पार्टीमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भइसकेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अवसान ।
हुन त एकताको विरोधी विषय झै मानिन सक्छ तर एमाले र माओवादी ब्राण्डको समापन आज हुँदैछ । राजनीतिमा ब्राण्ड भ्यालु महत्वपूर्ण हो । एमाले माओवादी एकतामा गएपनि कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टीको ब्राण्ड र माओवादीले छाडेको चुनाव चिन्हको संरक्षणबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
अहिलेलाई एकता वाम कार्यकर्ताहरुको लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भएपनि यसबाट एमाले र माओवादीको राजनीतिक ब्राण्ड सकिदैछ ।
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:५२ मा प्रकाशित